" Sida loo ka iPhone Delete Kalandarada
On iPhone iyo qalabka kale ee macruufka, xitaa ka dib taariikhda waano ama jadwal ah ayaa ka gudbay, entry weli ku saabsan telefoonka. Si aad u ogaato sida loo tirtirto, continue reading this article oo raac talaabooyinka hoos ku siiyo.
Talaabada 1: ka screen guriga fur app Kalandarada ah.
Talaabada 3: Hadda ka jaftaa on "Edit" biddix ee kore ee app.
Talaabada 4: Dooro jadwalka aad rabto in aad tirtirto ka soo liiska jadwalka.
Talaabada 5: Tubada "Delete ee badhanka si ay u tirtirto taariikheed ee la doortay.
Talaabada 6: Xaqiiji by siyoodba "Delete Calendar 'ka kor pop ah.
Sidee si joogto ah u tirtirto jadwalka tirtiray ka iPhone
Xitaa ka dib markii la tirtiro galo jadwalka ka iPhone ah, laga soo galo oo aan si buuxda u tirtiray, sababtoo ah waxaa lagu arki karaa ama soo kabsaday iyadoo la kaashanayo qaar ka mid ah software kabashada xogta. Habka ugu fiican ee sida joogtada ah u tirtirto jadwalka ka iPhone waa adigoo isticmaalaya Wondershare SafeEraser , software ka tirtirka xogta ugu wanaagsan ee ay jirto.
Ka dib markii la tirtiro xogta gaarka ah ka iPhone sida farriimaha, abuse wac, iwm xogta waxaa si buuxda ma tirtiray ka iPhone oo weli la soo kabsaday karaa iyadoo la isticmaalayo qaar ka mid ah software ama qalab. Si joogto ah masixi xogta ka iPhone aan suurtagalka ah u soo kabsaday, waxaad u baahan tahay in ay isticmaalaan SafeEraser Wondershare ah. Wondershare SafeEraser waa aalad si ay u masixi labada xogta gaarka ah iyo tirtiray aad ka iPhone. Waa software ugu wanaagsan ee masixi xogta shakhsiga ah sida farriimaha, abuse wac, iwm ama aad telefoon oo dhan. Wondershare SafeEraser taageertaa xog ku saabsan qalab aad sida xiriirada, fariimaha, sawiro, videos, barnaamijyadooda, warsan info, sirta iyo xogta shakhsiga kale ku kaydsan aad iPhone. Habka waxaa loogu talagalay, waxaa suuro gal ma soo kabsaday xogta tirtirayaa isticmaalaya nooc kasta oo software ka dib markii la isticmaalayo Wondershare SafeEraser in masixi macluumaadka telefoonka aad. Marka laga siday ugu adag mid ka mid ah isku dayo ama software waxaa loo isticmaalaa, kabsaday xogta tirtirayaa by Wondershare SafeEraser waa soo socota si ay wax aan macquul aheyn.
Simple iyo fududahay in la isticmaalo interface: interfaces user aad u fudud.
Dardar qalab aad: Delete junks si loo dedejiyo qalab u shaqeynayaan weyn.
Tirtir macluumaadka: Data tirtirayaa yihiin weligood tageen oo aan marnaba la soo kabsaday karo.
Taageerada xogta user kasta: Apps, fariimaha, sawiro, videos, xiriirada, macluumaad ku saabsan koontada, sirta, iwm
Best Data Protection: Ilaali files shaqsi.
Hawadda Picture: Bixi qalab aad la meel dheeraad ah oo sii tayada sawirada.
Tirtiro Speed ​​Fast: Ma aha in ay sugto muddo dheer xogta in laga tirtirayaa.
Sida loo isticmaalo Wondershare SafeEraser in ay tirtirto jadwalka tirtiray on iPhone
Talaabada 1: Download iyo rakibi SafeEraser Wondershare.
Talaabada 3: Si aad u masixi files tirtiray, guji "masixi tirtiray Files" ikhtiyaarka ka mid ah kuwa kale ee suuqa kala SafeEraser ugu weyn.
Talaabada 4: Sug SafeEraser Wondershare in ay si toos ah u falanqeeyaan iyo iskaan xogta tirtiray on qalab aad.
Talaabada 5: Ka dib markii raajo la dhammeeyo, xogta aad tirtiray lagu qori doonaa dhinaca bidix ee suuqa kala SafeEraser ah oo qaybo. Si aad u masixi aad jadwalka, calaamadee sanduuqa jadwalka siiyo dhinaca bidix ee suuqa kala SafeEraser ah iyo riix 'masixi Hadda' badhanka hoose ee suuqa kala ah in si joogto ah aad tirtirto jadwalka. Si aad u masixi macluumaad kale oo la tirtiro, si fudud u calaamadee sanduuqa ku xiga in xogta aad rabto inaad ka masixi oo ka dhacay button masixi ee badhanka.
Talaabada 6: in la keeneen in doonaa in aad ku qor erayga "tirtirto" si joogto ah u tirtirto xogta la doortay ka iPhone uu furmo suuqa soo socda. Nooca tirtirto iyo riix "masixi Hadda" badhanka si joogto ah u tirtirto iyo masixi aad jadwalka. Tani waa muhiim sida SafeEraser doonayaa in aad si dhab ah loo xaqiijiyo aad rabto in aad tirtirto xogta tan iyo markii ay dib ma la soo saari karaa.
Ka dib markii jadwalka la tirtiray, waxaad ka heli doontaa ah "guul tirtiray" Fariinta sida arkay sawirka hoos ku qoran.
Waa sidaas; aad si joogto ah tirtirayaa aad taariikheed ka iPhone isticmaalaya Wondershare SafeEraser.
Masixi iPhone Calendar on iPhone Video Tutorial
> Resource > masixi > Sida loo Delete Kalandarada ka iPhone